दरबार हत्याकाण्डपछि फेरिएको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य – Maitri News
दरबार हत्याकाण्डपछि फेरिएको नेपालको राजनीतिक परिदृश्य
maitrinews June 2, 2018
काठमाडौँ । स्टालिनलाई एकपटक एउटा नामुद विद्वान्ले, मिलोवन जिलासले हो कि जस्तो लाग्छ, प्रश्न गरेका थिए, ‘फ्रान्सेली इतिहासमा नेपोलियनको भूमिकाबारे तपाईंको धारणा के छ ? स्टालिनले भनेका छन्, ‘फ्रान्सेली क्रान्ति भएको दुई सय वर्ष पनि भएको छैन। यस सानो कालखण्डमा के भन्ने, के बुझ्ने ? ’
ऐतिहासिक कालखण्डका दृष्टिकोणले हेर्दा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएको १७ वर्ष पुगेछ। यस घटनामा एउटा पौराणिक आयाम छ। हजारौं वर्षदेखि राजनीतिमा कसले राज गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ। त्यसका विभिन्न उत्तर र प्रयोग भए। कालान्तरमा राजा र राजतन्त्रले शासन गर्ने अधिकार पायो। ईश्वरले नै राजालाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाउँछ र राजा नै ईश्वर हो भन्ने मान्यता चल्यो। हाम्रो बाउबाजेको पालासम्म राजाको पैतालाको माटो छोयो भने पाप कट्छ भनिन्थ्यो। राजा विष्णुका अवतार हुन्, उनैले नै शासन र राज गर्छन् भन्ने मान्यताबाट हामी चलेका थियौं। राजनीतिक विज्ञानले यसलाई वैधता ९लेजिटिमेसी० भन्ने शीर्षक दिएर यस विषयको अध्ययन गर्छ।
तर, के यतिमात्रै हो त रु इतिहासका घटनाक्रमहरू यसरी नै फलित हुन्छन् त रु अरू तथ्य के–के हुन् रु नेपाली समाजमा यता आएका परिवर्तन युगान्तकारी छन्। त्यस्ता परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा दरबार हत्याकाण्डको स्थान कहाँनेर छ रु
त्यस बेला जनताले ठाडै सोध्न थालेका थिए, ‘यस राज्यलाई प्रजाले बनाएको कि राजाले रु ’ २०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाले उत्पीडित बहुजनको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन। तर, जनसन्तोषले मात्र परिवर्तन हुँदैन। शासकवर्गमा पनि दुविधा र अन्तरविरोध रहनुपर्छ।
हत्याकाण्ड स् गणतन्त्रको पूर्वाभास
क्रान्ति कस्तो बेलामा हुन्छ भन्नेबारे विद्वान्हरूले लोकप्रिय परिभाषा गरेका छन्। लेनिनले समेत अनेकपटक दोहोर्‍याएका छन्। त्यो के भने जब शासितहरू पुरानै ढंगले आदेश मान्न तयार हुँदैनन्, यो एउटा कुरा हो। अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो शासकहरू पनि पुरानै ढंगले प्रजालाई कजाउन सक्षम हुँदैनन्। त्यस्तो समयमा शासितको अनिच्छा र शासकको अक्षमताले क्रान्ति हुन्छ। क्रान्ति मात्र शासितहरूको विद्रोह होइन। शासकहरूको अक्षमताको परिणाम हो। क्रान्तिको अध्येताहरूले भनेका छन्, ‘जनता त युगौंदेखि नै शोषित छन्। क्रान्ति त्यतिले मात्र हुने कहाँ हो र रु ’
दरबार हत्याकाण्डले हठात राजसंस्थाको वैधतामूलक भूमिकाको अन्त्य गरिदियो। यो सबभन्दा ठूलो कुरो हो। त्यो हत्याकाण्ड गणतन्त्रको पूर्वाभास थियो। माओवादी सिद्धान्तकारहरूले बेलैमा यस तथ्यतर्फ संकेत गरेका थिए। डा। बाबुराम भट्टराईले हो क्यारे, यस विषयमा केन्द्रित भएर तत्काल एउटा लेख पनि लेखेका थिए। बरु कांग्रेस र एमालेमा तत्काल चेतना आएको थिएन। थप के थियो भने जनमानसमा नयाँ राजालाई दरबार हत्याकाण्डको आरोपको छाप परेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रमा हुनुपर्ने प्रताप थिएन। शासन त राजाको प्रतापले गर्छ, बन्दुकले गर्दैन। बन्दुकले शासन गर्न खोज्नेलाई पनि कविहरूले सम्झाउने गरेका छन्, ‘शासन बन्दुकले गर्ने हो कि विचारले रु ’ एकातिर जनता हिजोकै जसरी शोषित हुन तयार थिएनन्, अर्कोतिर राजा ‘ श्री’हीन र प्रतापशून्य थिए। माओवादी जनयुद्धलाई यसले मलजल गर्‍यो।
२०४७ सालको क्रान्तिका एजेन्डा अनेक थिए। ती गुम्सिएर बसेका रहेछन्। माओवादी पार्टीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, तिनीहरूले त्यो अनुभूति गरे। क्रान्तीकरणको प्रक्रिया उनीहरूले थाले। सुस्तरी त्यो प्रक्रिया अघि बढिरहेको थियो। एकाएक वीरेन्द्रको हत्या भयो। हत्याले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि निरन्तरतामा चलिरहेको वैधानिक ९रु ० शासनमा प्रश्नचिह्न लाग्यो। क्रान्तिको औचित्य र विद्रोहको वैधताको अनुभूति आयो। त्यसले राजा ज्ञानेन्द्रको अक्षमतालाई झनै उजागर गर्‍यो।
त्यसपछि दोस्रो जनआन्दोलन भयो, सफल भयो। संयुक्त सरकार बन्यो। गणतन्त्र घोषणा भयो। अहिले नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी एकीकृत भएका छन्। सरकार बनाएका छन्। यसलाई कसरी हेर्ने रु
विश्वमा सर्वत्र क्रान्तिउत्तर कालमा एउटा संविधान बन्छ। हामीकहाँ पनि बनेको छ। तर, त्यो संविधानले तत्कालीन देश र समाजको शक्ति–सम्बन्धको वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गरेको छ कि छैन रु भूपति र जोताहा बराबर भयो त भनियो तर कसरी भयो रु सबै नेपाली जनता बराबर भनियो। तर, एउटाको करोडौंको सम्पत्ति छ, अर्को तन्नम छ भने कसरी बराबार भयो रु
बिदेसिएका युवाको पारिवारिक अवस्थाले समाजमा सांस्कृतिक विचलन ल्याएको छ। सिंगो समाजको आर्थिक विचलन त छँदै छ। हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा छैनौं। श्रममुखी अर्थतन्त्रको परिकल्पना छैन। श्रम र उत्पादन विदेशमा छ, त्यहाँबाट आएको पैसा हामी छलबलले बाँडीचुडी खान्छौं। रेमिट्यान्सको पैसा परिवारको भागमा कति पर्छ र रु परिवारले चामल किन्छ, चामलमा बढी भएको पैसा साहूले खान्छ, दलालले खान्छ, सरकारले खान्छ। यसरी बाँडिन्छ रेमिट्यान्स। रेमिट्यान्सको मूल पैसा उपभोग र विलासितामा खर्च भएको छ। अहिलेसम्मको सरकारले यसको चेतना देखाएको छैन। सरकारसँग भावुकता होला, तर भावुकताले मात्रै केही हुँदैन। मुख्य कुरा त्यसबाट भएका समस्या र विकृतिबाट छुटकारा हुनुपर्‍यो। त्यसको समाधानको जानकारी पनि हुनुपर्‍यो।
भूमण्डलीकरण र नवउदारवादको प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन, सिंगो विश्वमा छ। त्यसको कुनै विकल्प खोज्ने इच्छाशक्ति कतै देखिन्न। निकट अतीतमा नेपालमा अभूतपूर्व उथलपुथल भयो। विकल्पको खोजीका निमित्त नेपालले एउटा अवसर पाएको थियो। तर, त्यो मौका हामीले गुमाएजस्तो भएको छ। मौलिक चिन्तनका निमित्त नेपालको माटो अझै मलिलो छ। अगाडि के हो त रु
कुनै जमानामा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगा बीचको तरुल भनेका थिए। बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई दुई पहरा बीचको पुल पनि भनिरहेका छन्। शब्द राम्रो प्रयोग गरेका छन् उनले। तर, व्यवहारमा के गर्ने रु कुनै सार्थक विमर्श भएको छैन।
Previous Previous post: दुई मन्त्रालयसहित फोरम सरकारमा
Next Next post: पूर्वगृहमन्त्री शाहीको निधन